संविधान कार्यान्वयन र समृद्धिको लक्ष्य | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / संविधान कार्यान्वयन र समृद्धिको लक्ष्य
Posted by: युगबोध in अन्तर्वार्ता November 28, 2017	0 123 Views
दाङ निर्वाचन क्षे त्र नं.१ (२) प्रदे श सभा सदस् य पदका उम्मे दवार
मंसिर २१ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदे श सभाको निर्वाचन ह“ुदै छ । उम्मे दवारहरु मंसिर २१ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदे श सभाको निर्वाचन ह“ुदै छ । उम्मे दवारहरु आफ्नो पक्षमा भो ट तान्न प्रचार प्रसारमा ब्यस् त छन् । दाङ निर्वाचन क्षे त्र नं. १ (२) मा ने पाली कांग्रे सको तर्फवाट प्रदे श सभा सदस् यमा जानकीलाल बस् ने त उम्मे दवार हुनुहुन्छ । संविधान कार्यान्वयन र राष्ट्रको समृद्धि आफ्नो मुख्य लक्ष्य रहे को बताउनुभएको छ । चुनाव लक्षित गरे र युगबो धकर्मी दशरथ घिमिरे ले उहा“स“ग गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षे प यहा“ प्रस् तुत गरिएको छ । –सम्पादक
चुनावी तयारी कसरी भइरहे को छ ?
निर्वाचन मतदातास“गको सामिप्यता कस् ने महान पर्व जस् तै पनि हो  । मतदाताहरुले यो बे ला उम्मे दवारहरुलाई आशीर्वादस“गै गुनासा, तिक्तता, सुझाव र मनमा लागे का हरे क कुराहरु खो ल्ने अवसरका रुपमा पनि लिनुहुन्छ । यसर्थ हरे क मतदातास“गको सामिप्यता उम्मे दवारका लागि निकै अपरिहार्य रहन्छ । म पनि क्षे त्र नंं. १ प्रदे शसभा २ को सदस् य उम्मे दवारको है सियतले अहिले गाउ“का कुनादे खि शहरसम्मकै मतदाताहरुस“ग आत्मीयताको साइनो गा“सिरहे को छु । उहा“हरुको आशीर्वादस“गै उहा“हरुका सुझाव, गुनासा सुने र दे उखुरी क्षे त्रको समृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्तन र यो जना बुन्ने अवसर पनि मलाई मिलिरहे को छ । मतदाताहरुस“गको भे टघाट नै अहिले को मे रो पहिलो प्राथमिकता बने को छ । उहा“हरुको घरघरमै पुग्ने को सिस गरे को छु । घरमा नभे टिएकाहरुलाई पनि उहा“हरु कुन ठाउ“मा हुनुहुन्छ ? त्यो स् थान पत्ता लगाएर भे ट गरे को छु । चुनाव जीत हारको प्रतिस् पर्धा पक्कै हो । तर यसलाई जीत हारको रुपमा मात्रै नभई मतदाताहरुस“गको सामिप्यता गा“स् ने गतिलो अवसरका रुपमा पनि मै ले लिएको छु । ने पाली कांग्रे सको विजयका लागि कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पार्टीका जिम्मे वार साथीहरुस“गको छलफल, बहस निरन्तर चलिरहे को छ ।
के छ मतदाताको अपे क्षा ?
मतदाताहरु आफ्नो दै निकीस“गै गाउ“ समाज परिवर्तनको अपे क्षामा रहे का हुन्छन् । राजनीतिक दलहरु उनै जनताका प्रतिनिधि रहने भएकाले दलहरुप्रति विकासको अपे क्षा निकै ठूलो रहन्छ । यो ध्रुवसत्य कुरा हो  । बे ला–बे लामा हुने यस् ता निर्वाचन मतदाताहरुका लागि परिवर्तनको बाहकका रुपमा आउने गर्दछन् । मै ले भन्न खो जे को मतदाताहरुले चुनावलाई परिवर्तनको बलियो आधारका रुपमा लिने गर्नुहुन्छ । यो स् वाभाविक पनि हो  । आफ्नो मतले चुनिने जनप्रतिनिधिहरु उपल्लो तहमा पुगे पछि स् थानीय तहमा बिकास दिलाउनु ती जनप्रतिनिधिको दायित्व मात्रै है न, धर्म हो भन्ने म ठान्छु । परिवर्तनको अपे क्षामा रहने मतदाताहरुले यो निर्वाचनलाई पनि त्यसै रुपमा हे र्नु भएको छ । लामो समयदे खि अस् िथर विकास निर्माणले गति लिने विश्वास आममतदाताहरुमा छ । कुलो पानीको विषयदे खि ठूला–ठूला सडक, सिंचाई, विद्युत लगायत दीर्घकालीन यो जनाहरुको माग मतदाताहरुबाट भइरहे को छ । यसले के पनि दे खाउ“छ भने सशस् त्र द्वन्द्व गुजारे र शान्ति प्रक्रियामा आएको हाम्रो गाउ“समाज अहिले पनि सानै विकासबाट पनि बौ रिन सके को छै न । यसर्थ सामान्य विकासे यो जनादे खि ठूला आयो जनाहरुको अपे क्षा यो चुनावले मतदाताहरुलाई गराइदिएको छ ।
यहा“को उम्मे दवारी के का लागि ?
मुख्यतयाः ने पालमा जारी भएको संविधानको कार्यान्वयको महत्वपूर्ण घडीमा हामी छौ ं । यसै को कार्यान्वयनको चरणअन्तर्गत नै आसन्न प्रदे श र प्रतिनिधि सभा सदस् यको निर्वाचन हुन लागे को हो  । संविधानले गरे का व्यवस् थाहरुको अनुभूत जनतालाई गराउनु मे रो उम्मे दवारीको पहिलो प्राथमिकता हो  । यानिकी संविधान कार्यान्वयन नै मे रो उम्मे दवारीको पहिलो उद्दे श्य हो  । म क्षे त्र नं. १ प्रदे श सभा २ को ने पाली कांग्रे सको उम्मे दवार । मे रो चुनावी क्षे त्र बजारदे खि दूरदराजका नाका क्षे त्रहरु तथा पहाडी विकट क्षे त्रहरुलाई जो डे को क्षे त्र पर्दछ । म मे रो चुनावी क्षे त्रका हरे क गाउ“–गाउ“मा पुगे को छु । र त्यहा“का मतदाताहरुको साक्षात्कारमा मै ले के पाएको छु भन्दा ‘समृद्धि’ प्रमुख कुरा हो  । मे रो उम्मे दवारीबाट मतदाताहरुले राखे को अपे क्षा पनि यही हो  । शिक्षा, स् वास् थ्य, पानी, सडक, विद्युतजस् ता आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति अभावमा नागरिकहरुले सास् तीपूर्ण जीवन भो गिरहे को मै ले पाएको छु । त्यहा“ समृद्धि चाहिएको छ । कम्तिमा घरको आ“गनमा पिउने पानी त पुगो स् । ज्वरो आउ“दा सामान्य सिटामो ल खान त पाइयो स् । के यस् ता नागरिकहरुलाई यस् ता आधारभूत आवश्यकताहरु परिपूर्ति गर्न सकिदै न ? के राजनीतिक दलका उम्मे दवारहरुलाई पटक–पटक आफ्नो भो ट दिएर जिताएका उनै मतदाताहरुले सदै ब यस् तो सास् ती भो गिरहनु पनेर् ? उनीहरुलाई विकासको अनुभूति पनि गराउन सकिदै न ? अवश्य सम्भव छ । मै ले यो अठो ट लिएको छु कि यस् ता दूरदराजका नागरिकहरुलाई विकासको अनुभूति गराएर त्यहा“का नागरिकहरुले समृद्धिको अनुभूति गर्न सकून् । मुख्यतः दे उखुरी क्षे त्रमा वषेर् नि बाढी आतंकको सास् तीबाट दे उखुरीबासीहरुलाई जो गाउनुपनेर् दायित्व मे रो रहने छ । यसका लागि राप्ती नदीको दुबै तर्फको तटबन्धको यो जना बन्ने छ । ने पाल भारत सीमा क्षे त्रमा पिउने े पानीको अभाव, सडक, सञ्चारको अभाव, शिक्षालगायतका दै निक जीवनयापनका तमाम समस् याहरु चाङ लागे र बसे का छन् । नाका क्षे त्रलाई सडकस“ग जो ड्ने पहिलो यो जनासहित समग्र नाकालाई समृद्ध बनाउने मे रो अकोर् महत्वपूर्ण यो जना छ । रामपुरको पहाडी क्षे त्रमा सडक स् तरो न्नतिस“गै पिउने पानीको समस् या हल गर्नु छ । दे उखुरी क्षे त्रमा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपो र्ट निर्माणस“गै पर्यटकीय क्षे त्रको विकास मे रो अकोर् चुनावी एजे ण्डा हो  । दे उखुरीमा वर्षे नि सर्पको टो काइबाट अकालमा ज्यान गुमाउने को संख्या बढी छ । सुविधासम्पन्न अस् पतालस“गै सर्पदंशको उपचार के न्द्र खो ल्ने अर्काे एजे ण्डा छ । यीलगायत मे रो चुनावी क्षे त्रका हरे क मतदाताहरुले म समक्ष राखे का अपे क्षाका विषयहरुलाई मे रो चुनावी मूल मुद्दा बनाएर मै दानमा हो मिएको छु ।
चुनाव जित्ने आधार के ?
मै ले मे रो राजनीतिक यात्राका क्रममा के गरे ं के गरिन“ ? यो इतिहास बुझ्ने आम मतदाताहरु हुनुहुन्छ । यसर्थ मै ले यसो गरे ं उसो गरे ं भने र भन्नुलाई सान्दर्भिक ठान्दै न म । तर म यति मात्रै के भन्न सक्छु भने कुनै पनि पदीय जिम्मे वारीमा नरहे र पनि दलका ने ताहरुले विकास ल्याउन सक्दा रहे छन् भन्ने नागरिकहरुमा मे रो विश्वास छ जस् तो मलाई लाग्छ । यहा“लाई थाहै छ, मे रो राजनीतिक कालखण्डभरि कुनै पनि महत्वपूर्ण जिम्मे वारीमा रहिन । तथापि मै ले विकासको अनुभूति गराएको मतदाताहरुले बुझे को जस् तो मलाई लाग्छ । हो त्यही विश्वास मे रो विजयको प्रमुख आधार बन्ने छ । मतदाताहरुले विकास चाहे को अवस् था छ । विकासमा प्रयत्नशील रहने जनप्रतिनिधिको आवश्यकता गाउ“ समाजमा खड्किएको छ । मे रो चिन्तन र क्रियाशीलता पनि त्यसै का लागि रह“दै आएकाले पनि मप्रति कायम विश्वासले मलाई जिताउने छ ।
सजिलो छ त वाम गठवन्धनलाई चिर्न ?
दलीय गठबन्धन एउटा कुरा हो  । तर मतदाताहरुको अपे क्षा फरक विषय हो  । मतदाताहरुले वाम गठवन्धन हो ओ स् भने र कहिल्यै कतै भने को सुन्नु भयो ? उनीहरुले जहिल्यै एउटै कुराको आवाज निकाले त्यो हो ‘विकास’ । विकासको अपे क्षामा रहे का जनताको सम्बन्ध वाम गठवन्धनस“ग कुनै छै न । यो गठबन्धन त दलीय आस् थाले प्रे रित कार्यकर्ताहरुको गठबन्धन हो  । सर्वसाधारण नागरिकहरुको गठबन्धन है न नि । यसर्थ मतदाताहरुलाई कसको गठबन्धन कति बलियो ? यसमा फिटिक्कै चासो छै न । यसर्थ मै ले के भन्छु भने जनताको मन जित्ने गठबन्धनले है न, विश्वासले हो  । त्यो विश्वास कसले कायम गरे को छ ? मतदाताहरुले यसका आधारमा मतदान गनेर् छन् । अकोर् कुरा के पनि हो भने अरु बे ला जनताको सामिप्यतामा बस् नै नचाहने अनि चुनाव आएपछि यो वा त्यो नाममा मतदाताको मन जित्न खो जे र विश्वास जित्ने कुरै हु“दै न । किनकि मतदाताहरु धे रै सचे त छन् । विकसित राजनीतिक चे तनाले उनीहरुलाई के सही र के गलत
छुट्याउन सक्ने बलबुता प्रदान गरिसके को छ । त्यसै ले विगतको इतिहासलाई हे रे र मतदाताहरुले सही र गलत मूल्यांकन गर्छन् । चुनावको मुखै मा हात जो ड्दै मा चुनाव जित्ने दिनहरु अब पक्कै छै नन् ।
कांग्रे सभित्रको ‘विमति’ अकोर् पनि चुनौ ती छ नि ?
के कांग्रे सका जिम्मे वार ने ताहरुले कांग्रे सलाई नै हराउन सक्छन् ? तपाइ“ले भन्न खो जे को यही हो ? यो कदापि हो इन । ने पाली कांग्रे सभित्र मात्रै है न, वै चारिक भिन्नता हरे क पार्टीहरुमा छन् । हरे क पार्टीभित्र रहनु यो वै चारिक भिन्नता नै लो कतान्त्रिक संस् कार, पद्धति हो  । ने पाली कांग्रे सभित्र यो चुनावी हार, जीतको खे ल बन्न सक्दै न । न त हि“जो बने को थियो न भो लि बन्ला । स् वाभाविकै रुपमा ठूलो पार्टी ने पाली कांग्रे सभित्र एक से एक ने ताहरु हुनुहुन्छ । उहा“हरुका आ–आफ्नै इच्छा आकांक्षा हुन्छन् । टिकट वितरणमा सबै को चासो भयो । हुनु पनि पर्छ । तर टिकट नपाएपछि पार्टीकै उम्मे दवारलाई कांग्रे सीहरुले नै हराउ“छन् भन्ने भ्रम फै लाइएको छ । यो कदापि सत्य है न । कुनै पनि कांग्रे सीले कुनै पनि चुनावमा यो अन्तर्घाती ब्यवहार गरे को छै न । आसन्न निर्वाचनमा पनि यहा“ले भने जस् तो एकले अकोर् लाई घात गनेर् नियति कांग्रे सभित्र हुने छै न । किनकि सबै ने ताहरुमा ‘कांग्रे सको विजय’को एक मात्रै लक्ष बने को छ । उहा“हरु सबै कांग्रे सलाई जिताउनका लागि ज्यान दिएर लाग्नुभएको छ । अकोर् कुरा वाम गठवन्धनको नाममा जुन खालको भ्रम फिजाइएको छ यसले पनि कांग्रे सको मजबुती झनै कसिलो बनाइदिएको छ । यो कसिलो एकताले मात्रै पनि ने पाली कांग्रे सले विजय माला पहिरिने छ । म ढुक्क छु ।
अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ ?
संविधान कार्यान्वयन र समृद्धिको लक्ष बो के र म क्षे त्र नं. १ को प्रदे श सभा २ मा प्रदे श सभा सदस् यका लागि ने पाली कांग्रे सका तर्फबाट उम्मे दवार बने को छु । यसर्थ मलाई यो निर्वाचनबाट अत्यधिक मत दिएर आम मतदाताहरुले विजय गराइदिनुस् पहिलो मे रो आग्रह, अनुरो ध यही हो  । संविधान कार्यान्वयको यो महत्वपूर्ण चरणमा अहं भूमिका निर्वाह गदैर् विकास र समृद्धि दिलाउने मे रो मिशनलाई निरन्तरता दिइनै रहने छु । पदीय जिम्मे वारीमा नरह“दा मै ले अ“गाले को यो मिशनलाई पदीय जिम्मे वारीमा पु¥याएर अझ बढी रफ्तार दिने बाध्यता मलाई पारिदिनुस्, मतदाताहरुस“ग मे रो अनुरो ध छ । हिजो पनि म आमनागरिक स“गस“गै थिए“, आज पनि छु र भो लि झनै नजिक बन्ने मे रो प्रण छ ।
Previous: दण्डहीनतालाई प्रश्रय नदिऔं
Next: मैले जिते ं भने आउने तलव, भत्ता विकासमा लगाउनेछु
दाङ अब खेलकूदको हव
जमराको जुस सञ्जीवनी हो